Midowga Musharixiinta oo ka digay qorsho ay wado dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo ka digay qorsho ay wado dowladda Soomaaliya
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal digniin ah oo ku saabsan qandaraas shati bixin shidaal oo ay Wasaarada Bartoolka galeyso u diray Madaxda Dowladda, Dowlad Goboleedyada, labada Golle ee Baarlamaanka, Xeer ilaaliyaha & Hanti dhowraha Qaranka.
Qoraalkan oo ka kooban laba Bog ayaa waxaa lagu sheegay in Wasaaradda Batroolka Xukuumadda Soomaaliya ay dhawaan qorhsyeneyso in qandaraas shati bixin shidaal la gashao shirkada Coastline oo horay loo oran jiray Som-Oil iyo shirkada Liberty, iyada oo looga digay tallaabadaas.
Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay qoraalkooda ku sheegeen in ay xog ku heleen in maalmaha soo socda Wasaaradda batrool ay heshiis qarsoodi ah oo ku saabsan, shidaal sahmin, Baaris iyo qodis la galeyso laba Shirkadood oo dibadda laga leeyahay, kuwaas oo kala ah shirkadaha Coastline & Liberty, heshiiskaas oo ah halis aad u weyn oo kusoo fool leh masiirka iyo Midnimada Ummada Soomaliyeed & Kheyraadkooda.
Dowladda Soomaaliya & dowladaha Xubnaha ka ah dowladda Federaalka waxaa ay 5-tii Bishii June ee sanadkii 2018-kii Magaalada Baydhabo ku saxiixdeen heshiiskii wadaaga Kheyraadka Dabiigi ah, kaa soo dhigayay in heshiis walba oo la xiriira shidaal qodis, sahmin ama baaris uu noqdo mid daah furan lga dooday, la qiimeeyay, laguna heshiiyay ugu dambeyna lagu meel mariyay Golaha Shacbaka ka hor inta aan heshiiska la saxiixin ayaa lagu yiri” Qoraalka Musharixiinta.
Sidoo kale Midowga Musharixiinta waxaa ay sheegeen in DFS aysan geli Karin heshiis shidal qodis ah oo aan waafaqsaneyn Xeerarka Kheyraadka dabiiciga ah ee dowladda Soomaaliya iyo nidaamka heshiisyada Caalamiga ah ee Shidaal barista.
Qoraalka Musharixiinta oo aad u dheer ayaa waxaa sidoo kale lagu cadeeyay in heshiisyada ay xogta ku heleen oo ay saxiixi doonto Wasaaradda Batroolka Soomaliya oo wakiil ka ah dowladda Federaalka in uu jebinayo hehsiiskii dowladda Federaalka la gashay hay’adaha dhaqaalaha Adduunka, gaar ahaan IMF & Bangiga Aduunka , isla markaana halis aad u weyn oo lagama soo kabtaan ah uu gelinayo hanaanka deyn cafiska Soomaaliya, sidoo kalena ay keeni kareto in Soomaliya dib ugu celiso shuruudihii ay horay u buuxisay.
Previous articleMuxuu Madaxweynaha Koonfur Galbeed kala hadlay safiirada dalalka Turkiga & Qatar?
Next articleDowladda Soomaaliya oo mamnuucday hubka lala galo Garoonka Aadan-Cadde